ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်မှ ဆူညံသံ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ထားပါသလဲ?
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် အော်ပရေတာများအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ပေးအပ်ခဲ့စဉ် အချိန်ကတည်းက မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များအတွက် လျှပ်စစ်မီးရရှိသော ဒေသများတွင် မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးလုပ်ငန်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လျှောက်ထားရယူသုံးစွဲလျက်ရှိပြီး လျှပ်စစ်မီးမရရှိ သေးသည့်ဒေသများတွင်Solar စနစ်အသုံးပြု၍လည်းကောင်း၊ မီးစက် အသုံးပြု၍ လည်းကောင်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မီးစက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်တွင် ပါဝင်သော ဆူညံသံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များနှင့် တာဝါကုမ္ပဏီများကို ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရေဒီယိုလှိုင်းနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ဘယ်လိုစပ်ဆက်သလဲ?
အသံနှင့် အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများကို ရေဒီယိုလှိုင်း များမှတဆင့် သယ်ဆောင်၍ ဆက်သွယ်ရေးအခြေစိုက် စခန်းရှိ တာဝါတွင်တည်ရှိသော အင်တာနာများမှ လက်ခံ/ပို့လွှတ်ပါသည်။ ရေဒီယိုလှိုင်းများမှလေထုကို ဖြတ်သန်း၍ အားပျော့သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း (Electromagnetic field (EMF)) တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသည့် အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ အားပျော့သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း များ (EMF) ကို နေကဲ့သို့သော သဘာဝအကြောင်းတရားများ အပြင် ရေဒီယိုနှင့် တီဗွီထုတ်လွှင့်မှုများ အပါအဝင် လူသားများပြုလုပ်သည့် အကြောင်းတရားများမှလည်း ထုတ်လွှတ်ပါသည်။
မိုဘိုင်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစခန်းများသည်အများပြည်သူများ အတွက် အန္တရာယ်ရှိပါသလား?
ရေဒီယိုစခန်းရှိ အင်တာနာများမှ ရေဒီယိုလှိုင်းများသည် အလွန်အားနည်းသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အထောက်အထား တွေ့ရှိထားခြင်းမရှိပါဟု သိပ္ပံပညာရှင်များ တညီတညွတ်တည်း ယေဘုယျသဘောတူညီ ကြပါသည်။ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အတွက် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး စခန်းများကို နိုင်ငံတိုင်းတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) မှ လူသားတို့ အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက် စက်ကွင်း ပမာဏကို 300 micro watt per square centimeter သတ်မှတ်ထားရာ မိုဘိုင်းတာဝါအများစုမှ လွှင်အားမှာ 1 micro watt per square centimeter ထက်နည်းပါးသောကြောင့် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ မှတ်ချက်တွင် “ဆက်သွယ်ရေး ရေဒီယို လှိုင်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ကင်ဆာ (သို့) အခြားသောရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ကို တိုးပွားစေကြောင်းခိုင်မာသည့် သက်သေအထောက်အထားများ မရှိသေးပါ” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
တာဝါတည်ဆောက်သည့်မြေနှင့်ကပ်လျက် အိမ်များရေဒီယိုလှိုင်း ထုတ်လွှင့်မှုကြောင့် အန္တရာယ်ပိုရှိသည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ပါသလား?
တာဝါတိုင် တွင်ရှိသော အင်တာနာမှ လွဲ၍ တာဝါ၏ ကိုယ်ထည်မှ ရေဒီယို လှိုင်းများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း မရှိပါ။ တာဝါတွင် တပ်ဆင် ထား သည့်အင်တာနာများသည်မျက်နှာမူရာအရပ်သို့သာ ထုတ်လွှင့် သဖြင့် တာဝါအောက်ခြေတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း များ သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သဖြင့် အန္တရာယ် အနည်းဆုံးနေရာ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုသည့်တာဝါတိုင်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ သည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ?
အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအား နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှသာ တင်သွင်းအသုံးပြု ခွင့်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ထို့အပြင်ဝန်ကြီးဌာနမှ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မတ်လတွင် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအကူအညီ ဖြင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် တို့တွင် လိုအပ်သည့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး တာဝါရှိ ပစ္စည်းများ၊ ၄င်းတို့မှ ရေဒီယိုလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုသည် နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိကြောင်း နှင့် ရေဒီယိုလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုသည် နိုင်ငံတကာမှအန္တရာယ်ရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်ထက် ( အဆပေါင်း ၁၀၀ကျော် ) များစွာ လျော့နည်းကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်ကြောင့် မိုးကြိုးအန္တရာယ် ပိုရှိစေနိုင်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား?
တာဝါတိုင်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် မိုးကြိုးလွှဲများသည် သာမာန်အဆောက်အဦများတွင် တပ်ဆင်ထားသော မိုးကြိုးလွှဲ များထက်ပိုမို ကောင်းမွန်ပါသည်။ မိုးကြိုးပစ်မည်ဆိုပါက ၃၀-ဒီဂရီဝန်းကျင်သာ Cone of Silence လို့သတ်မှတ်ထားတာသဖြင့် တာဝါရှိခြင်းအားဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ကို မိုးကြိုးပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရာရောက်ပါသည်။
မည်သူတွေ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(သို့မဟုတ်) အသုံးချဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးလိုသည့် မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်၊ဌာန (သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် (သို့မဟုတ်) အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းအား ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ သည် သတင်းမီဒီယာပိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိသောကြောင့် သတင်းမီဒီယာ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်လိုသူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာမူဘောင်သည် လိုင်စင်ရရှိသူအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အမျိုးမျိုးအား ခွင့်ပြချက်တစ်ခုတည်းအောက်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ဘက်စုံ ဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာမူဘောင်အား အခြေခံထားပါသည်။ နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအား ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဆောင်ရွက်သွားမည့် စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာပုံစံပေါ်တွင် မူတည်၍ ဝန်ဆောင်မှု တူညီသော်လည်း လိုင်စင်အမျိုးအစားကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက် လိုသူအနေဖြင့် အော်ပရေတာတစ်ဦး၏ကွန်ရက်ပေါ်မှတဆင့် ADSL ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အသုံးချဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား လျှောက်ထားရယူရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအား ကိုယ်ပိုင် ကွန်ရက်တည်ထောင်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုပါက ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် အသုံးချဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှစ်ခုအား လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လိုင်စင်အရေအတွက်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် အချိန်ကာလအား ကန့်သတ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ။
မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ အရေအတွက်နှင့် ရှားပါးသောအရင်းအမြစ် ကန့်သတ်ချက်ကဲ့သို့သော အကြောင်းပြချက် များမှလွဲ၍ လိုင်စင်အရေအတွက်အား ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်ရာ တွင်လည်း အချိန်ကာလ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
လိုင်စင်အမျိုးအစားအသီးသီးအတွက် FDI level ကန့်သတ်ချက်များရှိ/မရှိ။ ပြည်တွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သူအတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိ/မရှိ။
FDI level ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ပြည်တွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအတွက် လိုအပ်ချက်များ သတ်မှတ်မထားပါ။
လိုင်စင်ရရှိပြီးနောက် ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ အပိုဒ်(၄) အရ မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူမဆို မိမိရရှိထားသော လိုင်စင်တွင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသော/ဖော်ပြထားသော ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှု များအား ဆောင်ရွက်လိုပါက ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအား လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ဌာနအနေဖြင့် လိုင်စင်ရရှိသူအား ၎င်းတို့ရရှိထားသည့် လိုင်စင်တွင် ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခွင့်အား ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျသင့်သော သက်ဆိုင်သည့်ဝင်ငွေအား ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ် သည်။
လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်လိုင်စင်တွင် မည်သည့်လိုင်စင်ကို ဦးစွာလျှောက်ထားရမည် နည်း။
လိုင်စင်ရရှိသူမဟုတ်ပါက လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်နှင့် အခြားရှားပါးရင်းမြစ်အသုံးပြုခွင့်တို့အား လျှောက်ထားခွင့် မရှိပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ဦးစွာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်လွှာတွင် အသုံးပြုလိုသော လှိုင်းနှုန်းအား အဆိုပြုတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သို့မှသာ ဌာနအနေဖြင့် လိုင်စင်အားခွင့်ပြုခြင်းမပြုမီတွင် အဆိုပြုထား သောလှိုင်းနှုန်းအား ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ အား ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် လိုင်စင်ရယူရန် လို/မလို။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် လိုင်စင်လျှောက် ထားရယူရန် မလိုပါ။ သို့သော်လည်း အဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနမှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံချက် ရယူဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။